21 Barnaamijyada Tafatirka Sawirrada ee ugu Fiican ee Lab & Dheddig ah
Bogga ugu weyn 21 Barnaamijyada Tafatirka Sawirrada ee ugu Fiican ee Lab & Dheddig ah
Haddii aad raadinayso hab lagu wanaajiyo sawirradaada, ha ahaato adeegsi shaqsiyeed ama si aad uga caawiso hawlgelinta meheraddaada, waxaa jira dhowr barnaamijyo tafatir sawir oo bixin kara xalka.
Uma baahnid inaad noqoto sawir -qaade tababaran si aad u soo jiidato xirfadahaaga tafatirka sawirka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa aalad leh kamarad wanaagsan iyo qaar ka mid ah barnaamijyadan tafatirka sawirrada, waadna fiicantahay inaad tagto.
Si ka sii daran, ma aha dhammaan abka tafatirka sawirku ma siman yihiin. Qaarkood waxay bixiyaan adeegyo ka wanaagsan shuruudaha tafatirka qaarkood marka loo eego kuwa kale.
Iyadoo aan loo eegin, waxaan iftiimiyay apps-yada ugu fiican ee qancin kara baahiyahaaga tafatirka sawirka. Haddaba, iyada oo aan dib loo dhigin, hoos waxaa ah 21ka abka ugu wanaagsan ee tafatirka sawirrada ee bilaashka ah ee ragga iyo dumarka.
VSCO waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirka ugu caansan. Waxay u adeegtaa qof kasta, laga bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa kuwa saameeya. Waxay u ogolaataa isticmaaleyaasheeda inay abuuraan muuqaal oo ay wadaagaan sawirro tayo sare leh oo kordhiya joogitaankooda internetka.
Intaa waxaa dheer, VSCO waxaa loo yaqaanaa inay haysato filtarrada tafatirka ugu fiican, iyo sidoo kale awoodaha tafatirka aasaasiga ah sida soo-gaadhista, isbarbardhigga, saturation, heerkulka, iyo qallafsanaanta. Xakamaynta tafatirka waxay kuu ogolaaneysaa inaad u beddesho sawirada waxyaabo soo jiidasho leh.
Qaybta ugu fiican ayaa ah, haddii fikraduhu kaa dhammaadaan, bulshada VSCO waxay kuu oggolaanaysaa inaad sahamiso waxyaabaha ay dadka kale tafatireen si aad u hesho dhiirigelin.
App -ka ayaa labadaba loo heli karaa macruufka iyo Android iyo isku xidhka qalabyo badan.
Snapseed waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee tafatirka sawirka ee isticmaalayaasha Android iyo iOS. Si weyn ayaa loo isticmaalaa sababtoo ah aad bay u fududahay in la isticmaalo, xitaa iyada oo la ururiyo qalabyada tafatirka ee badan.
App-kan waxa isticmaali kara kuwa bilawga ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee sawir qaadayaasha. Intaa waxaa sii dheer, koontaroolkeeda tafatirka ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud u wanaajiso midabka, soo-gaadhista, iyo fiiqnaanta sawirkaaga.
Aaladaha xulashada iyo buraashyada ayaa kuu oggolaanaya inaad tafatirto qaybo ka mid ah sawirkaaga, halka aaladda sawirku ay kaa caawineyso inaad abuurto sawirro aan cillad lahayn oo leh maqaar jilicsan iyo indho dhalaalaya.
Barnaamijkan, waxaad ku abuuri kartaa sawirro yaab leh.
Akhri ALSO: Sida Lacag Loogu Sameeyo Sawir Qaade | 20 Siyaabood oo Fudud
TouchRetouch waa barnaamij tafatir sawir oo ku habboon, caan ku ah ka saarista waxyaabaha aan loo baahnayn sawirkaaga. Barnaamijyo sawirro badan leh waxay leeyihiin aalado qabta isla shaqadan, laakiin tani waa waxa TouchRetouch uu ku saleysan yahay oo keliya, hab -socodkiisuna waa sahlan yahay.
Si aad uga saarto shay, si fudud u isticmaal fartaada si aad u iftiimiso, oo fiirso markay baaba'ayso! Barnaamijku wuxuu si otomaatig ah ugu beddelaa shayga la soo xulay pixels ka agagaarka agagaarka.
Intaas waxaa sii dheer, aaladda ka saarta iinta leh waxay ku habboon tahay abuurista sawirro muuqaal ah oo aan cillad lahayn, halka aaladda ka -qaadista xariiqdu ay fududaynayso in fiilooyinka korontada laga saaro sawirkaaga.
#4. AutoDesk Pixlr
AutoDesk Pixlr waa tafatire sawir oo bilaash ah oo leh in ka badan 2 milyan oo isku-dar ah oo saameyn ku leh, filtarrada, iyo dulsaarrada.
Appku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto isku-duubyo sawir leh oo leh naqshado kala duwan, asal, iyo kala fogaansho kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira sifo auto-fix ah oo dheellitiran midabka sawirkaaga. Taas oo dhan ma aha, sawiro badan ayaa la isku dhejin karaa oo la isku dari karaa.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Aaminaadu? Dulmar guud, iyo dhammaan inaad ogaato 2022
AutoDesk Pixlr waxay ku siinaysaa astaamo tafatir oo kala duwan oo aad isticmaali karto si aad sawirkaaga ugu beddelato wax cajiib ah. Waxaana u diyaar ah isticmaalayaasha Android iyo iOS.
#5. Isku darka
Mextures waa barnaamij tafatir sawireed kale kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku dabaqdo muuqaalada, daadinta iftiinka, iyo gradients sawiradaada.
Waxay bixisaa socodka shaqo ee aan kala go' lahayn oo aan burbursanayn, si aad u hagaajin karto oo aad wax uga baddali karto sawirada marxalad kasta oo habka tafatirka ah oo aadan ka welwelin tayada faylkaaga oo sii yaraanaya.
Intaa waxaa sii dheer, waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso oo aad tafatirto qaacidooyinkaaga, sidaa darteed way fududahay in lagu dabaqo isku -darka isku -habeynta sawirro badan.
Isku -darka ayaa ku habboon milkiilayaasha meheradda hal -abuurka ah ee raadinaya inay abuuraan sawirro soo jiidasho leh, oo aad loo tafatiray.
Akhri ALSO: 20 Xirfadaha Ugu Faa'idada Badan In 2022 Mushahar Lagu Baro
Kaarboon waa app tafatir sawireed kaas oo ugu fiican abuurista sawiro madow iyo caddaan ah oo indhaha soo jiidanaya.
App-ku waxa uu leeyahay in ka badan 50 filtarrada hore loo diyaariyey oo leh saamayn madow iyo caddaan ah oo kala duwan, si aad had iyo jeer u heli karto mid ku habboon sawirkaaga.
Intaa waxaa u dheer, barnaamijku wuxuu leeyahay shaandhooyin kaa caawiya inaad abuurto saameyn duug ah oo gaar ah sida qaabab qallafsan, hadhuudh, dillaac fudud, iyo bokeh.
#7. Adobe Lightroom
Haddii aad raadinayso abka tafatirka kaa siinaya hagaajinta saxda ah ee midabka iyo soo-gaadhista, ka fikir Adobe Lightroom. Alaabooyinka Adobe waxaa loo yaqaanaa inay sameeyaan tafatir heer sare ah oo Lightroom lagama saarayo.
Abkan waxa uu ku siinayaa xal awood leh, haddana fudud oo aad ku tafatirayso sawiradaada. Shaandhooyinkeeda hal-tabag ah ee hore u habeeyay waxay bixiyaan hab degdeg ah oo fudud oo kor loogu qaado sawiradaada.
Waxaa jira wax intaa ka badan. Aaladaha tafatirka ee horumarsan, oo ay ku jiraan hagaajinta xulashada, waxay ku siinayaan xakamaynta ugu dambaysa ee tafatirkaaga.
#8. Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee loogu daro qoraalka sawirrada. Waa nooca mobilada ee Photoshop, barnaamijka tafatirka sawirrada ee Adobe. Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan Photoshop, Express waa adeeg lacag la'aan ah.
Barnaamijku wuxuu bixiyaa tafatirka caadiga ah iyo astaamaha hagaajinta sawirrada, iyo sidoo kale aaladaha ku dara qoraallada sawirrada.
Astaantani waxay markaa kuu oggolaaneysaa inaad ku dul dhejiso qoraalka sawirradaada, si aad u abuuri karto memes, ogeysiisyo soo saarto, ama aad ku darto macluumaadka shirkadda sawirradaada. Waxaa laga heli karaa labada macruufka iyo Android qalab lacag la'aan ah.
Kaameeraha + waa app u wanaagsan milkiilayaasha meheradaha ee doonaya inay toogtaan oo tafatirto sawirrada hal barnaamij oo dhammaystiran.
Waxay bixisaa qaabab toogasho horumarsan, sida xasilinta qabashada sawirrada fiiqan iyo qarxinta qaadashada tallaallada degdegga ah. Ka dib markii aad sawir qaadatay adiga oo adeegsanaya Camera+, si toos ah ayaad ugu tafatiri kartaa barnaamijka.
App-ka waxa ku jira hawlaha tafatirka aasaasiga ah sida goynta, ku darista xuduudaha, iyo adeegsiga qoraalada - iyo sifooyin aad u horumarsan, sida hufnaanta, qaababka muuqaalka, iyo sanduuqa iftiinka.
Camera+ waxa ay leedahay is dhex galka warbaahinta bulshada, si aad si dhakhso ah sawir ugu galiso Facebook, Twitter, iyo Flicker. Waxaa loo heli karaa isticmaalayaasha iOS kaliya.
Akhri ALSO: 20 Goobaha Sawirka Sawirka Lacag La'aanta Ugu Fiican Sanadka 2022
#10. Iftiinka dambe
Afterlight waa barnaamij kale oo tafatir sawir leh oo leh ujeedo dheeri ah oo hal-abuur leh. Aad bay u fududahay in la isticmaalo inkasta oo ay leedahay qalab dhammaystiran oo qalab tafatir ah.
XIDHIIDHKA: Halkee si dhakhso leh loogu iibin karaa Buugaagta Maadda ah 2022 | Buugaag Hore & Cusub
Intaa waxaa sii dheer, waxay bixisaa aalado tafatir joogto ah sida midabka, soo -gaadhista, fiiqan, iyo aaladaha dalagga. Qalabkeeda horumarsan waxaa ka mid ah qalooca iyo midabka xulashada ah.
Astaamahani waxay kuu oggolaanayaan inaad si fiican u hagaajiso midabada iyo codadka sawirradaada si aad uga hesho sawirradaada sida ugu wanaagsan.
Iftiinka dambe waa bilaash in la soo dejiyo laakiin waxaa jira wax-soo-iibsasho gudaha ah oo kuu oggolaanaya inaad gasho dhammaan agabka tafatirka iyo filtarrada.
Haddii aad raadinayso app kuu oggolaanaya inaad isku darto oo aad sawirro dul saarto, markaa superimpose waa ninka adiga kuu ah.
Barnaamijkan wuxuu ku habboon yahay milkiilayaasha meheradaha ee raadinaya inay abuuraan sawirro heer-xirfadeed ah halkaas oo sawirro badan lagu dul-dhejiyay oo la isku daray.
Waxaad si sahal ah isugu dari kartaa laba sawir, geesaha siman, ku dari kartaa waji-xidhka ama maaskaro qaybo kala duwan oo sawirka ah, oo aad hagaajin kartaa midabka, soo-gaadhista, is-barbardhiga, ama buuxinta labada sawir.
Waa fudud, beddelka mobilada ee ka shaqaynta lakabyada Adobe Photoshop. Inkasta oo ay diiradda saarayso sawirada, waxay bixisaa qalab lagu saxo sawirada sidoo kale.
#12. Qallooca Lens
Burburinta Les waa codsi ku habboon in lagu daro iftiinka qorraxda, ololka muraayadaha, roobka, barafka, iyo saamaynta ceeryaanta.
Ku-darka tayada sare leh waxaa ka mid ah iftiinka qorraxda, ololka muraayadaha, roobka, barafka, iyo ceeryaanta. Waxa kale oo jira saamayn dhaldhalaalaan iyo waxyaabo muraayad ah si loogu daro dhaldhalaal ama dhalanteed sawirkaaga.
Si loo gaaro muuqaal gaar ah, waxaad lakabayn kartaa saamaynta kala duwan ee sawirkaaga.
#13. Sheeko Midab leh
Iyadoo in ka badan 7 milyan oo la soo dejisto, sheeko midabkeedu yahay mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirrada ee ugu caansan.
Barnaamijkan wuxuu ku habboon yahay milkiilayaasha meheradaha ee rajaynaya inay abuuraan sawirro iyo fiidyowyo cusub oo leh midabbo soo baxaya.
Marka laga soo tago hawlaheeda tafatirka aasaasiga ah sida dalagga, Sheekada Midabka ayaa leh in ka badan 100 filtarrada la heli karo. Marka aad dhammayso tafatirka sawirkaaga waxaad ku kaydin kartaa shabaqyada oo waxaad bilaabi kartaa inaad wax ka beddesho kuwa kale, kaa caawinta inaad abuurto shabakho sawireed isku xidhan ee warbaahinta bulshada.
Sheekada Midabka ayaa diyaar u ah macruufka iyo Android qalabka.
Akhri ALSO: 21 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Sawirro [$ 100+] | 2022
In kasta oo kanaalka warbaahinta bulshada, Instagram wuxuu bixiyaa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee kor loogu qaado sawirradaada wax yar ka hor intaadan wadaagin.
App-ku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso tafatir/ hagaajinta aasaasiga ah ee sawiradaada adigoo siinaya qalabka tafatirka aasaasiga ah ee aad u baahan tahay.
Waxay leedahay midabyo kala duwan oo wanaagsan iyo filtarrada madow iyo caddaanka ah si ay u beddelaan muuqaalka iyo dareenka sawirkaaga.
Instagram waxaa laga yaabaa inaysan u kala duwanayn sida barnaamijyada kale ee tafatirka sawirrada, laakiin waxay hubaal tahay inay siiso aaladaha loo baahan yahay si loogu sameeyo isbeddel aasaasi ah sawirkaaga.
#15. Qolka madow
Darkroom waa barnaamij tafatir wanaagsan oo tafatirka sawirro badan hal mar. Waad abuuri kartaa gaagaabyada Siri, tafatiri kartaa RAW ama sawirro toos ah, maareyn kartaa hashtag -yada la xiriira sawirradaada, oo aad isku waafajin karto albumkaaga sawirrada oo dhan.
Qeybta ugu fiican ayaa ah, maahan inaad ku koobnaato taleefankaaga. Waxaad tafatiri kartaa sawirrada lagu qaaday kamarad dijital ah.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Bilaabo Ganacsi Qorshayn Maaliyadeed 2022
Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay shaandhooyin badan oo laga soo xusho, oo xitaa kuu oggolaanaya inaad adigu abuurto. Waxaa kaliya laga heli karaa macruufka.
#16. Sawir -qaade
Photofox waa barnaamij kale oo tafatir sawir oo awood leh kaas oo kuu oggolaanaya inaad ka saarto maadooyinka asalka oo kuu oggolaanaya inaad ku biirto asal cusub.
Saamayntiisa kala -firdhinta waxay ka dhigaysaa mawduucaaga inuu ku qarxo walxo, iyo sidoo kale saamaynta dhaldhalaalka iyo soo -gaadhista laba -geesoodka ah ee isku dul dhejisa laba sawir.
Photfox waxaa heli kara dadka isticmaala macruufka kaliya.
#17. Sawirada Farshaxanka
App kale oo sawir tafatirka ka dhigaya liiska waa PicsArt. Appku waxa uu bixiyaa qalab tafatir oo kala duwan oo laga soo bilaabo hagaajinta aasaasiga ah sida soo-gaadhista iyo ka soo horjeedka qiimaynta midabka shaleemada iyo filtarrada cajiibka ah ee u beddela sawiradaada qaybo farshaxan oo u eg.
Marka laga reebo tafatirka, PicsArt waxa ay soo bandhigtaa qaab wadaag bulsho oo qaabka Instagram ah halkaas oo aad ku wadaagi karto sawiradaada.
#18. Kaamirada 360
Barnaamijka Camera360 sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirrada ee aadka loo isticmaalo. Waxay leedahay in ka badan 600 milyan oo isticmaale adduunka oo dhan waxayna ku badan tahay Aasiya.
Iyada oo leh in ka badan 200 shaandhooyin oo aad kala dooran karto, waxaad dhadhamin kartaa muuqaalka sawirradaada oo aad u beddeli kartaa wax ka wanaagsan.
Akhri ALSO: 10 Qalabka Wireframe ee ugu Fiican Sanadka 2022 | Samee Sketch waqtiga dhabta ah
FaceTune waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirrada ugu wanaagsan oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo sawirrada iyo sawirrada.
Barnaamijku wuxuu ballaarin karaa dhoolla caddaynta, wuxuuna iftiimin karaa ilkaha. Intaa waxaa dheer, waxaa loo isticmaali karaa in laga saaro finanka iyo iinnada iyo iftiiminta wareegyada madow ee indhaha hoostooda.
Taas oo dhan ma aha, waxaad isticmaali kartaa app-ka si aad u nadiifiso khadadka daanka, dib u qaabaynta sanka, ku dar midab bushimahaaga oo aad mari kartaa hadhka cas iyo hadhyada indhaha.
#20. Dib -u -habeyn
Repix waa barnaamij kale oo sawir tafatir ah oo ay isticmaalaan in ka badan 10 milyan oo qof oo adduunka ah. Waxay leedahay in ka badan 25 burush oo saamayn leh iyo filtarrada kuwaas oo u beddela sawiradaada qaybo soo jiidasho leh.
Isku soo wada duuboo liiska abka ugu wanaagsan ee tafatirka sawirada waa Prisma. Prisma waa abka tafatirka sawirka mobaylka kaas oo u beddela sawiradaada iyo fiidyowyada qaybo fanka dhiirigeliyay.
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad sawir qaaddo ama fiidyoow inta aad isticmaaleyso app -ka ama mid ka soo duub kaameradaada oo dooro shaandhada.
Prisma waxay isticmaashaa algorithm waxbarasho qoto dheer si ay u isticmaasho shaandhayn kasta oo hal abuur leh sawirada iyo fiidyaha. Waxaa diyaar u ah isticmaalayaasha iOS iyo Android labadaba.
Halkaa waad haysataa! Liis dheer oo ah barnaamijyada tafatirka sawirrada ugu fiican ee aad isticmaali karto. Dhex mari liiska oo hel midka kugu habboon si aad u bilowdo abuurista sawirro heer sare ah.
Dhammaan kuwa ugu fiican.
12 Baabuur ee ugu Fiican oo leh Astaamaha Wadista Gawaarida ee 2022
10 Barnaamijyada Farriinta Farriinta Qarsoon ee ugu Fiican Sanadka 2022 -ka
Sida Lacag Loogu Siinayo Maanta Cougars -ka 2022 | 5 Hababka Ugu Fiican
Sida Loo Iibiyo Sawirada Online 2022
Sida Loo Bilaabo Meherad Sawir Qaadasho 2022
Buugga Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Wanaagsan ee La Heli karo 2022
Sida Loo Bilaabo Meherad Nadiifinta Laga Soo Bilaabo xoqitaanka 2022?
Immisa Ayay Sameeyaan Dallaaliinta Amaahda?
Horudhac Dilaaliinta amaahda guryaha ayaa ku dhow shuruud looga baahan yahay jawiga dhaqaale ee maanta. Celceliska qiimaha guriga ayaa kor u kacay…
Tababaraha shakhsi ahaaneed waa shakhsi leh aqoon qoto dheer iyo xirfado uu ku naqshadeeyo iyo sidoo kale bixinta
15ka kamaradood ee ugu Qarsoon ee Amniga Guriga | 2022
Ma la yaabtay waxa ay yihiin kamaradaha amniga guriga ee ugu qarsoon? Tag kamaradaha la qariyay...
Wax soo saarka shaqaaluhu shaki kuma jiro inuu saameynayo haddii caafimaadka xubin qoyska ka mid ah uu khatar ku jiro.…